नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालमा बल्ल १८ प्रतिशत मानिसले लगाए कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप, ८८ प्रतिशतले कहिले पाउने हुन खोइ !
नेपालमा बल्ल १८ प्रतिशत मानिसले लगाए कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप, ८८ प्रतिशतले कहिले पाउने हुन खोइ !
चीनबाट थप ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप काठमाडौं आइपुगेको छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खोप लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो । निगमको वाइडबडी– ३३० जहाज बिहीबार खोप लिन चीनको बेइजिङ गएको थियो । सरकारले चीनबाट पछिल्लो सयम खरिद गरेको ६० लाख डोज भेरोसेल खोपमध्ये १६ लाख मात्र आएको थियो ।
काठमाडौं जिल्लामा यही असोज ४ गते (साेमबार)देखि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइँदै छ । शुक्रबार स्वास्थ्य कार्यालयले सूचना जारी गर्दै पहिलो डोज लगाएकाहरुलाई तीन दिनसम्म चिनियाँ खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइने जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाइँदै छ । वडा भित्र तोकिएको ठाउँमा पहिलो खोप लगाएको कार्ड देखाएर दोस्रो मात्रा लगाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ । कीर्तिपुर नगरपालकिामा १० ठाउँमा र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा १५ ठाउँमा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाइँदैछ ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपत्यकामा पहिलो मात्रा ४४.३३ प्रतिशत र पूर्ण मात्राको खोप ४० प्रतिशतले लगाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा १५ लाख ५५ हजार आठ सय ९५ जनाले पहिलो मात्रा र ११ लाख ७१ हजार चार सय २० पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । मुलुकभरि पहिलो मात्रा १९.९ र पूर्ण मात्रा १८ प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् ।
यस्तै उहाँले भक्तपुरमा पहिलो र पूर्ण मात्रा खोप ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्या तथा ललितपुरमा पहिलो मात्रा ४५ प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले लगाइसकेका बताउनुभयो ।
महाशाखाका निर्देशक डा लालले उपत्यकाका विशेष क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसोलाई खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक शिक्षक र विद्यार्थीलाई पनि खोप लगाइसकिएको छ । “हामीले उपत्यकाका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने सबैलाई खोप लगाइसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सर्वसाधारण ४० वर्षभन्दा माथिकालाई आउने खोप लगाउँछौँ ।”
नेपाल सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि खोप लगाउन सुरु गरेयता सात महिनामा यही भदौ १६ गते नै एक करोड ९२ हजार एक सय ६४ जना सर्वसाधारणले खोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि उहाँले सबै नेपाली नागरिकलाई खोप पुर्‍याउने पहिलो प्राथमिकताका रुपमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सुरुमा ६५ वर्षभन्दा माथिका र स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा काम गर्ने सरसफाइकर्मी, कोभिड–१९ विरुद्धको रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका काम गर्ने व्यक्तिबाट सुरु गरिएको खोप अहिले ५० वर्षमाथिका प्रायः सबैलाई दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
देशभर कोभिशिल्ड पहिलो मात्रा २४ लाख ९३ हजार तीन सय ३३ र दोस्रो मात्रा १४ लाख ४५ हजार तीन सय ५१ जनाले लगाइसकेका छन् । यस्तै भेरोसेल पहिलो मात्रा ३५ लाख ६३ हजार आठ सय ६१ र दोस्रो मात्रा २६ लाख २७ हजार ६ सय ५५ जना तथा जोन्सन एन्ड जोन्सन १४ लाख एक सय ४५ जनाले लगाइसकेका छन् । भदौ महिनामा सबभन्दा बढी पहिलो मात्रा भदौ ३० गते दुई लाख ९९ हजार एक सय ३१ जनाले लगाएका थिए ।
सरकारले आगामी असोजसम्म लक्षित वर्गको ३३ प्रतिशत र चैत मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउन सक्ने जनाएको छ । सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर खोप लगाइनेछ । मोडर्ना ४० लाख र फाइजर ६० लाख मात्रा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा लालले अहिलेसम्म नेपालमा एक करोड ३३ लाख ५८ हजार सात सय १० मात्रा खोप आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चीनको रेडक्रसले नेपालको रेडक्रसलाई थप एक लाख मात्रा खोप दिनेसमेत जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई सुरुमा माघ ८ गते भारतले १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि सरकारले आफैँ १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटसँग फागुन ९ गते १० लाख मात्रा खोप खरिद गरेको थियो ।
Posted by www.Nepalmother.com at 1:49 PM